KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD 9.7.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 9.7.0 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဟောလိဝုဒ်: Kim Kardashian အတွက်အနီရောင်ကော်ဇောစွန့်စားမှုအပေါ် Kim Kardashian Join! သင့်ကိုယ်ပိုင်အယောင်ဆောင်အနုပညာရှင် Create နှင့်နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ကံကြမ္မာမှထမြောက်!
⋆သင့်ကိုယ်ပိုင် STAR CREATE နှင့် Kim Kardashian ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Picks အပါအဝင်စတိုင်ရွေးချယ်စရာရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကြည့်စိတ်ကြိုက်!
သင်သည်အခြားအနုပညာရှငျမြားနှငျ့, ဆက်ကပ်အပ်နှံထားပရိသတ်တွေ, မြဲ paparazzi ကြုံတွေ့ရ ... နှင့်ပင် Kim ကသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားအဖြစ်ကြီးမားသောအပြန်အလှန်စွန့်စားမှုအတွက်⋆ STAR!
⋆တစ်ခု A-list ကိုရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်, အဖုံးမော်ဒယ်, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်အနီရောင်ကော်ဇောစည်းကမ်းများ - သင်သည်အဘယ်သို့ပြုမည်ကိုသင်မှတက်ပါ!
⋆သီးသန့်ကလပ်, upscaling ဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်ဇိမ်ခံအိမ်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ကို virtual လောကမှာရှိတဲ့ L.A. လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ! နယူးယောက်စီးတီးနှင့်မိုင်ယာမီမှခရီးသွား!
အကောင်းဆုံးကိုပါတီများနှင့်အပူဆုံးကလပ်အသင်းမှာ⋆ရက်စွဲနှင့် dump အနုပညာရှငျမြားနှငျ့! ပရောပနှင့်လာမည့်ကြီးမားအနုပညာရှင်အာဏာစုံတွဲဖြစ်လာ!
⋆ Facebook ကိုသုံးပြီးစီး FOR တလျှောက်တွင်သင့်မိတ်ဆွေတွေကိုဆွဲခေါ်ပါ - ကျော်ကြားမှုမှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမြင့်တက်လာကူညီစတိုင်များနှိုင်းယှဉ်, လက်ဆောင်ပေးပို့နှင့်အကြီးမားဆုံးကြယ်ပွင့်ဖြစ်နိုင်သူကိုမြင်ရ!
"သင်ကကင် K သည်ဂိမ်းကစားမလား? ၏သင်တန်းကိုသင်လို "- MTV ရဲ့သတင်းများ
" ... ဟာအကြံအစည်ထုတ် Check! ! အီး - ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်အစစ်အမှန်အရာတစ်ခုတံထွေးထွေးခြင်း image ကို "ပါ! အွန်လိုင်း
"ကျမ်းစာငါတကယ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်သို့မဟုတ်ဒီတစ်ခုရှေ့တော်၌ Single-player ကိုဆဲလ်ဖုန်းဂိမ်းကိုသုံးဖူးပါဘူး။ " - Fashionista.com
"သင်အမြဲတမ်း Kardashian မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုတော့ပါကသင့်ရဲ့ကံကောင်းနေ့ကပါပဲ။ " - မာရီကို Claire
"သင်ပိုကောင်း, သင့် Vogue pout လေ့ကျင့် y'all start" - စွဲမက်ဖွယ်ရာ
© 2014 Glu မိုဘိုင်း Inc ကိုအားလုံးအခွင့်အရေး။
Kim Kardashian: ဟောလိဝုဒ်, TM နှင့် All rights reserved Kimsaprincess, Inc 2014 ©။ Kim Kardashian နှင့် Kardashian Kollection အပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်းများ, မှတ်သားသိနိုင်နှင့်ရုပ်ပုံများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်မြေတပြင်လုံး၌, Kimsaprincess, Inc တို့ကပိုင်ဆိုင်သောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်, ဖြစ်ကြပြီးဤနေရာတွင်လိုင်စင်အောက်တွင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
- ဤဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့ Google Account ကိုအခကြေးငွေကောက်ခံမည့်အချို့သောအပိုပစ္စည်းများ, များအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဆပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable နိုင်ပါတယ်။
- Advertising ကြော်ငြာဒီဂိမ်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
- ဤဂိမ်းသည်ဤအင်္ဂါရပ်များရရှိမှုအပေါ် မူတည်. (ဥပမာ, အခန်းပေါင်း chat, ကစားသမားစကားပြောခန်း, စာတိုပေးပို့ရေးမှကစားသမား) အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ရန်အသုံးပြုသူများအားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ social networking site များချိတ်ဆက်ထိုကဲ့သို့သော social networking site များရဲ့သက်ဆိုင်သောစည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်မှုအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်။
www.Glu.com/privacy: - Glu သင့်ရဲ့ဒေတာစုဆောင်းနှင့်ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းကိုသိချင်တယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒအဖတ်ပါ
- သင်သည်ဤဂိမ်းတွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိပါကဂိမ်းရဲ့ "အကူအညီ" အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပါ။
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
kitiapps စတိုး 1.55k 643.28k
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 9.7.0
File Size: 394.82MB
Release date: 2018-12-06 09:41:59
KIM KARDASHIAN: HOLLYWOOD APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ